Ukubaluleka kokuhlukaniswa kwesigaba isinxephezelo esizenzakalelayo se-capacitor esebenzayo yamandla okunxephezela ngamandla
Isigaba sokuhlukaniswa okuzenzakalelayo kwesinxephezelo sokusebenza samandla esisebenzayo singahlukaniswa sibe yisinxephezelo sesigaba sesithathu se-capacitor futhi sihlukanise isigaba se-capacitor isinxephezelo esizenzakalelayo ngokuya ngezakhiwo zazo. Isigaba ezintathu capacitance isinxephezelo esizenzakalelayo yi-suita ...
Yini imisebenzi ye-voltage low capacitor ehlakaniphile esakhiweni
I-low-voltage power capacitor ehlakaniphile igqobhoza imishini ekhona yesinxephezelo esisebenza ngamandla aphansi esakhiweni, ibona imodi entsha yokulawulwa kwamandla kanye nokuphathwa okuphakathi; uhlelo lwesinxephezelo lunezici zamadivayisi amancane, izinga lokushisa elincane lenyuka ...
Inqubo yokusebenza kwamandla capacitor
(1) Ukusebenza okuphephile kwe-capacitor I-capacitor izosebenza kumthamo olinganisiwe. ngokwesikhashana, akunakwenzeka ukusebenza ngaphakathi kobubanzi obungu-5% wamandla kagesi alinganisiwe; lapho idlula izikhathi eziyi-1.1 zamandla alinganisiwe, kuvunyelwe ukusebenza kwesikhashana kuphela. Kodwa-ke, ukuqhuma okukhulu kwe-outgoin ...